डिग्रीवाली गृहिणी :: अनिता कोइराला :: Setopati
'ए साँच्चै! कति पढिस् हँ?'
'के काम गर्छेस्?
'घर-व्यवहार सम्हालेको छु।'
'केही काम गर्दिनस्? उसो भए किन पढेको त त्यत्रो! किन चाहियो त्यो जाबो डिग्री घरधन्दा गर्नलाई मात्र? छ्या! एसएलसी र एमएमा के फरक भयो त? कम्तीमा खरदार त हुनू। त्यो नभए बोर्डिङ स्कुल भए पनि त पढाउनू। के फाल्तुमा घर बसेकी? सड्नी नै भइस्।'
कार्यक्रममा मलाई सुन्ने एक जना शुभचिन्तकले अरूको सामुन्नेमा मेरो प्रशंसा गर्नुभयो। एक जना जागिरे साथीले फ्याट्ट बोलिहाल्नुभयो, 'एमए गरेर जागिर खान नपाएको पीडा र उकुसमुकुस यस्ता सानातिना काममा भए पनि उपयोग भएछ।'
'फलेको वृक्ष नझुकेको कहाँ छ र' लेखनाथलाई नमन गरेँ। अनि उसलाई सही आफूलाई गलत हुन दिएँ।
'डिग्री गरेको मान्छे, कस्तो सानो कुरा गरेकी!'
'तँलाई सुहाउँदैन गुनासो गर्न। तँ त बुझ्ने मान्छे, तैंले बुझ्न नै पर्छ,' परिवारमा केही समस्या आइलाग्दा फेरि मेरो डिग्री मेरो श्रीपेच हुन्थ्यो। अरूको गल्तीहरूमा मैले सहकार्य गर्नु पर्थ्यो।
'तँ त पढेकी मान्छे, अरुले नबुझे पनि तैंले त कुरा बुझ्नु पर्छ नि! के अनपढ्झैं गरेकी! आफ्नो डिग्रीको मान त राख् जागिर खान नसके पनि।'
एक जना ससुराकै उमेरको बुवाले सोध्नुभयो, 'छोरी कि बुहारी?'
प्रसंगबिना नै ससुराले भन्नुभयो, 'एमए गरेकी छन्। काम केही छैन, घरै बस्छिन्। एमएसम्म छोराले पढायो, के गर्नु? जागिर छैन।'
'चिया खाऊँ न, थकाई लागेर भुतुक्क भैएछ?' ससुरा बा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, 'भोक पनि लाग्यो।'
'के गर्नु एमए पास छन् त नि, काम छैन। अनि यो ट्याँ-ट्याँ बजायो बस्यो। कमाएर ल्याइदिने छँदै छ, मोज छ। केही गर्नु पर्दैन। विचरा राति नै उठेर कमाउन जान्छ, दिनभरि गोरुझैं एक्लै जोतिन्छ। बिहे गर्दा त आइए मात्र पास हो नि! बिहेपछि पढाएको एमएसम्म। खर्च मात्र भयो, काम लागेन। सुक्को पैसा कमाएको छैन। माइतीबाट पनि दाइजो ल्याछैन, अभागी रहेछ। एक्लै धानेको छ यो भवसागर।'
अब प्रश्न उठ्छ 'के सबै डिग्रीधारी शिक्षित छन् त?'
भर्खरै एउटा बौद्धिक जमातबीच हात हालाहाल भयो। 'केलाई भन्दा देख्नेलाई लाज!' जहाँ बोलेर युद्ध गरिन्छ, बोलेरै युद्ध लडिन्छ, बोलेरै युद्ध जितिन्छ, बोलेरै युद्ध हराइन्छ। त्यस्तो जमातमा पनि किन विवेक गुम्छ? के शिक्षाको उपलब्धि यही हो?
मेरो हालखबर सोधपुछ गरेपछि सोध्नुभयो, 'कति पढिस्?'
'समाजशास्त्रमा एमए गरेँ।'
मैले आँखा तल नझारी प्रोफेसरको आँखामा हेरेर भनेँ, 'म सतप्रतिश गृहिणी हुँ।'
'तँ केही काम गर्दैनस्?'
प्रोफेसरको मान राखेँ, 'जागिर खाएको छैन सर। घरको व्यवस्थापनमै व्यस्त छु।'
'ए, उसो भए तँ पनि घरेलु!'
पहिचान नखुलेको काम!
प्रकाशित मिति: बिहीबार, मंसिर २३, २०७८, ०५:००:००